IsiHanduan | Abenzi beFenitshala yesiqhelo
ISIMBO SOKUYILA OKUQHELEKILEYO
Isitayile sabenzi befanitshala ngokwesiko sahlulwe ikakhulu kwisitayile sangoku kunye nesitayile saseScandinavia. Inkampani ihlala isebenzisa izinto ezisemgangathweni ezikrwada kwaye ikhethwe ngononophelo, kwaye iimfuno zobugcisa zezokugqwesa.
Ifenitshala eyenziweyo eyenziwe ngokwezifiso
Uhlobo olwahlukileyo kunye nolwexesha langoku
Kuphando lwemveliso kunye nophuhliso, inkampani ine-R yobungcali kunye nebalaseleyo
D iqela, elidibanisa uR& D, imveliso kunye nentengiso.
Iimveliso zenkampani zibandakanya uthotho lwesuti, uthotho lwegumbi lokuhlala, uthotho lwegumbi lokutyela, uthotho lweebhedi zabantwana, iphakheji yehotele yobunjineli, kunye nephakheji yendlu iphela. Ezona zinto ziphambili zenziwe ngothotho lwefenitshala yegumbi lokulala, kubandakanya ibhedi eyenziwe ngomthi kunye ne-wardrobe eyenziwe ngomthi. Isitayile semveliso yenkampani sahlulwe ikakhulu kwisitayile sangoku kunye nesimbo seNordic. Inkampani ibisoloko isebenzisa izinto ezikrwada ezikumgangatho ophezulu kwaye yaphumelela Ukukhetha ngononophelo, ukugqibelela kweemfuno zobungcibi, kunye nesitayile sayo sokuyila, ubugcisa obugqwesileyo, kunye nenkonzo enyanisekileyo, iphumelele abathengi, yaphumelela ngaphezulu kweshumi kwinkangeleko yelizwe kunye noyilo amalungelo awodwa omenzi wechiza, kwaye waba uyilo lokuqala lweMveliso yeNkokeli.
Ukubuya kweentsuku ezingama-45
Iintsuku ezingama-90 zokugcina simahla
Ulwabiwo lwedolophu olungama-250
Foshan Handuan Furniture Co., Ltd. yasekwa ngo-2012.
Itholakala eLecong, eShunde, eFoshan, eGuangdong, e-China, eyona mveliso yehlabathi ifenitshala enkulu. Iindibano zocweyo zemigangatho emikhulu yanamhlanje kunye neqela labasebenzi abakulawulo olusemgangathweni ophezulu, ngoku inesiseko semveliso seemitha ezili-10,000, abasebenzi abakhoyo abangama-100, inkampani yazisa iimveliso ezaziwayo zasekhaya kunye nezinye izixhobo zemveliso eziphambili zokukhusela imveliso. Ngokujonga iimeko zangaphakathi, inkampani inobungcali kwaye ilungile R
& D iqela kuphando lwemveliso kunye nophuhliso, kunye neqela lezentengiso elinobuchule kunye nenkqubo yokuthengisa egqibeleleyo kwintengiso, edibanisa uR& D, imveliso kunye nentengiso.
Izitayile zemveliso yenkampani zahlulwe ikakhulu kwizimbo zangoku kunye nezitayile zeNordic. Ifanitshala eshushu yamaplanga okulala iqulethe ibhedi yomthi ephindwe kabini kunye newadi yeplanga. Inkampani ihlala isebenzisa izinto ezikrwada ezikumgangatho ophezulu kwaye ikhethwe ngononophelo. Iimfuneko zenkqubo zigqwesa, kwaye uyilo lwayo oluyingqayizivele, ubugcisa obugqwesileyo kunye nenkonzo enyanisekileyo iphumelele uninzi lwabathengi obathandwayo, iphumelele ngaphezulu kweshumi imbonakalo yelizwe kunye nemodeli yokuyilwa kwamalungelo awodwa omenzi wechiza, kwaye yaba yinkokeli kuyilo lokuqala lweemveliso zeshishini.
Bambelela kwimibono ekhokelayo ye-ergonomics, impilo kunye nokhuselo lokusingqongileyo.